QM oo ka shiraysa Caruurta lagu Dhibaateeyo Caalamka – Radio Daljir
Juunyo 10, 2015 11:00 b 0
Arbaco, Juun 10, 2015 (Daljir) — Warbixin Sannadeed cusub eoo ay QM soo saartay ayaa lagu soo bandhigay Waddamada carruurta loogu adeegsado Askarnimo, isla markaana lagu dhibaateeyo.
Afhayeenka QM, Stephane Dujarric ayaa sheegay in Warbixinta lagu soo bandhigay 22 Waddan oo si aad loogu tacadiyo carruurta.
Wakaalladda Wararka Shiinaha ee XINHUA oo heshay nuqul ka mid ah Warbixinta ayaa sheegtay inay tobanaan milyan oo carruur ah ku soo barbaraayaan waddamo ay colaaduhu ragaadiyeen.
Warbixinta ayaa lagu magacaabay 14 waddan oo ka mid ah 22-ka dal ee lagu eedeeyey inay ku tacadiyaan Carruurta, u adeegsadaan Askarnimo, la dilo ama lagula kaco fara-xumeyn.
Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay inay Kooxaha hubeysan ku dagaalamaan goobaha ay ku yaallaan Dugsiyadda iyo Isbitaalladda Carruurta.
Warbixinta cusub ee QM, waxaa lagu muujiyey 14-ka waddan ee kala ah:- Afganistan, Bartamaha Afrika, Kongadda Dimuqraadiga, Iraq, Mali, Mayanmar, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Colombia, Nigeria iyo Filibiin.
QM ayaa bishii March ee sannadkii hore bilowday Olole loogu magac daray “Carruurta, maya Askari” oo lagu badbaadinayo carruurta, waxaana ololahaasi lagu taageerayaa sidii looga hortegi lahaa Cauurrta la askareeyo sannadka soo socda.
Ololahaasi waxaa diiradda lagu saaray dalalka Somalia, Labada Sudan, Afganistan, Kongadda dimuqraadiga, Mayanmar iyo Yemen.
Xoghayaha Guud ee QM, Ban Ki-moon ayaa la sheegay inuu go’aansaday inaan Liiska lagu darin Tacadiyadda ay Yuhuudda u geystaan carruurta Falastiin.
Dhinaca kale, xubnaha Golaha Ammaanka ee QM ayaa bishan 18-da yeelan doona Shir Furan oo looga xaajoonayo Warbixinta looga hadlay Carruurta iyo Colaadaha Hubeysan.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo Bosaaso uga qayb-galay kulan looga hadlayay Amniga